❤️ Ulongeza njani ibali kwi-Instagram - Facebook
Kude kube ngoku, kwakusoloko kukho ukubhideka malunga nendlela yokuthumela iBali le-Instagram. Ukuba uthumela ibali lakho lokuqala okwethutyana, ungacofa + kumfanekiso wakho weprofayile kwaye unokongeza ifoto okanye ividiyo emfutshane kwibali lakho.
Kodwa xa sele uyenzile loo nto, wona + uyanyamalala. Wenza ntoni ke xa ufuna ukuthumela elinye ibali ?
Enkosi kuhlaziyo olutsha lwe-Instagram, lo mba uye wasonjululwa ngandlel’ ithile. Ngoku kulula kakhulu kwaye kulula ngakumbi ukupapasha ibali, kwaye kukho iindlela ezintathu eziphambili:
Chukumisa uphawu + njengoko kubonisiwe ngasentla – kunokwenzeka kuphela kwibali elitsha
Swayipha ngasekunene kwiposti yakho
Cofa i icon yekhamera phezulu ngasekunene.
I-Instagram ngokucacileyo yavuma ukuba abasebenzisi bayo, ingakumbi abantu abangekho Abanomdla kwi-Instagrammers, waziva edidekile. Ukuba ufuna umboniso okhawulezayo wendlela nganye, khangela isikhokelo sethu esinamacandelo amathathu ngezantsi.
Ibali le-Instagram elivela kumfanekiso weprofayile
Lo ulungile ngokuthumela ibali elikhawulezayo, kodwa isebenza kuphela ukuba awuzange uthumele ibali elidlulileyo kwiiyure ezidlulileyo ze-24. Ungasebenzisa le ndlela kwisondlo sakho okanye iphepha leprofayile.
Cofa nje umfanekiso wakho weprofayile ngophawu +.
Emva koko unokuthatha ifoto okanye ividiyo okanye ulayishe enye.
Emva koko ucofe kwibali lakho ezantsi ngasekhohlo kwaye ibali lakho liya kupapashwa.
Thumela ibali ngokuswayipha ngasekunene
Ibisoloko iluphawu, kodwa ukuba awuyazi ukuba ikhona, unzima kakhulu ukumfumana.
Yitsale nje ngqo kwisondlo sakho.
Thatha ifoto okanye uyifake kwithala leencwadi.
Cofa kwibali lakho ezantsi ngasekhohlo kwaye liya kupapashwa.
Thumela ibali ngokucofa kwikhamera esekunene phezulu
Eli linqaku elitsha elivela ku-Instagram kwaye lithetha ukuba abantu ngoku banokuthumela ibali ngendlela ecace ngakumbi.. Unokwenza oku kwiposi yakho.
Kwiposti yakho, cofa nje i icon yekhamera phezulu ekhohlo.
Khetha umfanekiso okanye ividiyo oza kuyisebenzisa.
Cofa kwibali lakho kwaye ibali lakho liya kupapashwa
Inzuzo yeendlela ezimbini zokugqibela kuluhlu kukuba unokuzisebenzisa ukongeza ifoto eyongezelelweyo okanye ividiyo kwibali lakho, nokuba sele uyiposile enye. Indlela yokuqala ayizukusebenza ukuba sele unayo i-Instagram Live Story.
Kutheni ndilahlekelwa ngabalandeli baka-Instagram : Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisa
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaLeliphi elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram ?